यस्ता छन् जीवनमा पालना गर्नुपर्ने ३ स्तम्भहरू, जानी राखौ
डिसेम्बर 31, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	जीवन, भिटामिन
जीवनमा पालना गर्नुपर्ने ३ स्तम्भहरू ! खाना, निन्द्रा र सेक्स नभई नहुने बस्तु अन्तर्गत पर्दछन् । बाच्नका लागि शरीरलाई पोषण खानाको आवश्यक पर्दछ । सन्तुलित खानेकुरा नखाएमा हामीलाई अनेकौं रोग लाग्न सक्दछ । प्राकृतिक हिसाबले उमारिएका र मौसम अनुसारका खानेकुरा मात्र हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अनुकूल हुन्छन् ।
मौसमी फलफूल, हरियो सागसब्जी र अन्य आवश्यक पोषण तत्वयुक्त खाद्यवस्तुको प्रयोग गर्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा प्राकृतिक खानेकुरा प्राय: असम्भव छ । अनेक रसायन मिसिएको खाद्य पदार्थ मात्र पाइने गरेको छ ।
लामो समयदेखि भण्डारण गरेका फ्रिजमा राखेका र प्रेशर कुकर र अन्य साधनको प्रयोग गरेर पकाएका खानेकुरामा पोषण तत्व नष्ट भएको हुन्छ । हामीले खानेकुरा आवश्यक भन्दा बढी भएमा वा कम खाएमा पनि रोग लाग्न सक्छ । हामीले खानेकुरा बढी भएमा शरीर ज्यादा मोटो हुने बोसो जम्न जाँदा उच्च रक्तचाप मुटुको रोग सुगर जस्ता रोग लाग्न सक्छ ।
निन्द्रा पनि स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ । हामी मेहनत गर्छौं यदि हामीलाई निन्द्रा भएन भने पनि विविध रोग लाग्न सक्छ । स्वस्थ रहन जति खानाको आवश्यक छ त्यति नै निन्द्राको पनि आवश्यक छ । निन्द्रा नलाग्नाले डिप्रेसन बढ्ने हुनाले कम्तीमा ८ घण्टा हरेकलाई निन्द्रा आवश्यक छ ।
सेक्स विना जीवन अधुरो छ । जहाँ सेक्स छैन त्यहाँ सुख छैन भन्दा हुन्छ । प्रेमको गहिरो सम्बन्ध सेक्समा छ भन्दा हुन्छ । सेक्सकै कारण अनेकौं घर बर्बाद भएका छन् । हिजो ब्रम्हचर्यको पालना गर्नु स्वास्थ्यका लागि ठिक भन्ने थियो तर अहिले सेक्स नगर्नाले पनि विविध रोग लाग्न सक्छ भनेको छ । हामीले जे जस्तो काम गरेपनि सीमामा रहेर गर्न सके धेरै राम्रो हुन सक्छ ।
हाम्रो स्वास्थ्य ठिक होस् भन्नाका लागि के कस्ता भिटामिन शरीरलाई आवश्यक हुन सक्छ भन्ने जानकारी हरेकले लिन सके समयमा रोग लाग्नुबाट आफुलाई बचाउन सकिनेछ । आज हामीलाई अनेकौं रोग लाग्ने गरेको छ यसको पछि शरीरलाई चाहिने आवश्यक भिटामिनबारे जानकारी तल दिइएको छ ।
१. Protein को कमि भएमा शरीर दुब्लाउने हुन्छ ।
२. Vitamin A को कमिले आँखा कमजोर हुनुको साथै वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने निन्द्रा नलाग्ने, छाला खुइलिने कलेजो बढ्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छ ।
३. Vitamin B को कमी रक्सी बढी खानेहरूलाई यसको कमि हुने गर्दछ । Beriberi जस्ता रोग लाग्न सक्छ । यो भिटामिन कम हुनेहरूलाई वाक-वाक लाग्ने बान्ता हुने जस्ता समस्या देखिन सक्छ । मुख भित्र घाउ हुने, ओठ र जिब्रोमा घाउ हुन सक्छ ।
४. Folate यसको अभावमा पनि जिब्रो, ओठमा घाउ हुन सक्छ । पाचन प्रणाली कमजोर हुन सक्छ ।
५. Vitamin C को कमिबाट गिजा सुनिने रगत बग्ने छालाबाट रगत बग्ने घाउ खटिरा चाँडो निको नहुन सक्छ ।
नोट : आजको लेखमा मैले ५ प्रकारको भिटामिनको बारेमा मात्र जानकारी पस्केको छु । अन्य लेखमा थप भिटामिनबारे प्रकाश पार्नेछु । कुनै पनि भिटामिनबाट भएको कमजोरी हटाउन डाक्टरसंग परामर्श लिएर उपचार गर्न सक्नु हुनेछ ।
← सम्पति देखेको पाइदैन पाइन्छ मात्र लेखेको
यौन र स्वास्थ्य →
फ्रेवुअरी 3, 2017 फ्रेवुअरी 4, 2017 साइन्स इन्फोटेक	0
अगस्ट 28, 2018 नोभेम्बर 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक	8